Xafiiska Caafimaadka DDSI Oo Mootooyin Qaybiyay. - Cakaara News
Xafiiska Caafimaadka DDSI Oo Mootooyin Qaybiyay.
Jijiga(CN) jimce, 8da January,2016, Xafiiska caafimaadka ayaa waxa uu dadaal xoogan ugu jiraa kor u qaadida iyo waxka qabadka adeegyada caafimaadka bulshada gaar ahaan hooyada iyo dhalaanka oo tayaysan isaga oo adeeg sanaya siyaasada caafimaadka ee ku salaysan ka hortaga.
Haddaba waxa uu xafiiska caafimaadka DDSI Qaybiyay maanta 47 mooto oo loogu talay galay in ay kaalin mug leh ka qaataan dhinaca wacyigalinta iyo baraarujinta caafimaadka bulshada . Mootooyinkan oo uu soo iibiyay xafiiska caafimaadka gaar ahaan mashruuca hoos u dhigita dhimashada hooyada iyo dhalaanka ee marka afka qalaad magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan( RIF) oo ay hirgalintiisa iska kaashateen xafiiska caafimaadka, ururka horumarinta somalida itoobiya iyo hay’ada ACPA ayaa waxa loo qaybiyay mootooyinkan 47 degmo uu kuu ka hawlgalo mashruucani.
Wasiirka xafiiska caafimaadka DDSI mudane Cabdifataax Siciid Maxamed ayaa qaybka mid ah mootooyinkan ku wareejiyay maareeyaha ururka horumarinta somalida itoobiya mudane cabdifataax shekh ismaaciil oo iyaguna sii gaadhsiintoona degmooyinkii loogu talagalay.
Wasiir Cabdifataax Siciid ayaa ka hadlay ahmiyada ay leeyihiin mootooyinkan iyo kaalinta ay ka qaadanayaan hirgalinta adeegyada caafimaadka bulshada gaar ahaan tan hooyada iyo dhalaanka ee uu marshuucani ka hawlgalo, wuxuuna ku booriyay hay’adaha iyo maamulada degmooyinka kuwa gobolada in ay mootooyinkan u adeegsadaan jihooyinkii loogu talagalay oo kaliya ilaaliyaana daryeelkooda.
Dhankiisa maareeyaha ururka horumarinta somalida itoobiya mudane Cabdifataax Sheikh Ismaaciil ayaa sheegay muhiimada ay leeyihiin gaadiidkani ka urur ahaana sidii loogu talagalay u meel-marintoodaan qaybta ay masuuliyadeeda qaateen.
Waxaa kale oo ka mid ahaa masuuliyiintii ka hadlay madashaasi wakiilka socday hayada ACPA oo isna sheegay ahmiyada ay leeyihiin iyo adeega ay bixinayaan mootooyinkani.
Maareeyaha mashruuca hoos u dhigida dhimashada hooyada iyo dhalaanka ee RIF mudane Shaafici Daahir Muuse ayaa sharax dheerka bixiyay adeega ay bixinayaan mootooyinka kaasi oo sheegay in ay wacyigalinta iyo baraarujin dhinaca caafimaadka hooyada iyo dhalaanka ee tuulooyinka iyo tuula hoosaadka deegaanka loogu talagalay in ay qayb-ka qaataan.